Banyere Anyị - Foshan Fumei aba Co., Ltd
Anyị ụlọ ọrụ nwere ụfọdụ ọkachamara, elu-edu management na mmepe mkpara. Ha na-etinye aka rụọ na huu ngwaahịa mma, emelite ngwaahịa style na imewe na-eme ka anyị ụlọ ọrụ na-aga n'ihu. Ha ga-eme ka anyị niile na ngwaahịa ga-eziga ndị ahịa na elu àgwà ka anya dị ka o kwere omume.
Anyị nwere ụfọdụ anụ ụlọ alaka na Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Ha'erbin, Jilin, Shandong, zhengzhou, Suzhou, Fujian, Wuhan wdg Anyị na ngwaahịa na-mbupụ America, Australia, Russia, Middle East, Africa, South East Asia na ụfọdụ mba ndị ọzọ.
Ịnọgide na-elekwasị anya ugbu a na-atụ anya ọdịnihu, anyị jupụtara obi ike na-eme ka a na-okwu mmepe atụmatụ nwere olileanya na-erubere enyi n'ụwa nile, na-enweta a mmeri-mmeri chọrọ ma m na gị . Anyị na-ekpebi imekota na ọhụrụ na ndị agadi ahịa kee narị afọ iri na ntọala na-ghar-eme n'ọdịnihu.